फस्फोरस पत्ता र 1669 मा जर्मन रसायनविद् एच बै्रन्ट द्वारा छुट्टयाएर थियो। प्रकृति, यो तत्व मात्र यौगिकों को रूप मा पाइन्छ। प्रमुख खनिज - phosphorite Ca3 (PO4)2र apatite 3Ca3 (PO4)2• CaF2 वा Ca5F (PO4) 3। यसबाहेक, तत्व प्रोटिन को भाग हो, र पनि दाँत र हड्डी मा पाइन्छ। फस्फोरस सजिलैसँग अक्सिजन र क्लोरीन साथ प्रतिक्रिया छ। यी पदार्थ को एक अतिरिक्त को यौगिकों संग गठन गर्दै ओक्सीकरण ऑक्सीकरण +3 मा - (पी लागि) + 5, र अभाव। फस्फोरस ओक्साइड विभिन्न रसायन प्रदर्शन धेरै सूत्रहरू प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। तिनीहरूलाई बीच, सबै भन्दा साधारण - P2O5 र P2O3 छ। अन्य दुर्लभ र गरिबी अध्ययन आक्साइड हो: P4O7, P4O8, P4O9, PO र P2O6।
मौलिक फस्फोरस को प्रतिक्रिया, अक्सिजन ओक्सीकरण बिस्तारै स्थान लिन्छ। यसको विभिन्न पक्षमा रुचि। पहिले, अँध्यारो, स्पष्ट देखिने त्यो पछि जो चमक, मा। दोश्रो, को ओक्सीकरण एक रासायनिक पदार्थ सधैं ओजोन को गठन संग ठाउँ लिन्छ। त्यसपछि, पी + O2 → PO + ओ: हे + O2 → O3 योजना - यो मध्यवर्ती उठयो कारण हो - phosphoryl PO। तेश्रो, परिवेश हावा को विद्युत चालकता मा आकस्मिक परिवर्तन कारण कारण यसको आयनीकरण गर्न ओक्सीकरण। रासायनिक प्रतिक्रिया मा महत्वपूर्ण reheating बिना प्रकाश को अलग, chemiluminescence भनिन्छ। आर्द्र वातावरण हरे chemiluminescence कारण मध्यवर्ती PO को गठन गर्न।
फस्फोरस ओक्सीकरण मात्र एक निश्चित अक्सिजन एकाग्रता मा हुन्छ। यो न्यूनतम तलको थ्रेसहोल्ड र अधिकतम माथि हुनु हुँदैन को आंशिक दबाव O2। अन्तराल नै तापमान र अन्य कारक मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, मानक अवस्थामा, को प्रतिक्रिया दर शुद्ध अक्सिजन, फस्फोरस ओक्सीकरण बढ्छ सम्म यो 300 mmHg पुग्छ। कला। लगभग शून्य गर्न अक्सिजन आंशिक दबाव त्यसपछि कम हुँदा फल्स पुग्न 700 मिमी Hg। कला। र माथि। तसर्थ, ओक्साइड त फस्फोरस लगभग ऑक्सीकरण छैन, साधारण अवस्थामा गठन भएको छैन।
सबैभन्दा विशिष्ट फस्फोरस pentoxide ओक्साइड वा छ उच्च आक्साइड फस्फोरस को, P2O5। यो एक पन्जेन्ट गंध संग सेतो पाउडर छ। यसको आणविक वजन को जोडी मा निर्णय गर्दा, यो उचित रेकर्ड यसको सूत्र P4O10 छ कि फेला परेन। यो nonflammable पदार्थ, यो 565,6 सी द Anhydride P2O5 ओक्साइड सबै विशेषता गुण -kislotny मा पिघलने, तर यो avidly त एक desiccant छ तरल वा ग्याँसहरु रूपमा प्रयोग गरिन्छ, चिस्यान अवशोषित छ। फस्फोरस ओक्साइड जो रसायन को भाग हो, पानी लाग्न सक्छ। को Anhydride एक अक्सिजन वातावरण वा हावा, O2 योजना पर्याप्त रकम मा फस्फोरस को दहन द्वारा गठन गरिएको छ: 4P + 5O2 → 2P2O5। यो एसिड H3PO4 को उत्पादन मा प्रयोग गरिन्छ। पानी संग सम्पर्क मा तीन एसिड फारम गर्न सक्छन्:
metaphosphoric: P2O5 + H2O → 2HPO3;
pyrophosphoric: P2O5 + 2H2O → H4P2O7;
फस्फोरिक: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4।
फस्फोरस pentoxide पानी र यस्तो काठ वा कपास रूपमा पदार्थ पानी युक्त, संग हिंसापुर्वक प्रतिक्रिया। यो गर्मी को ठूलो रकम पनि आगो कारण सक्ने खेल्छ। यो धातु जंग र धेरै रिस (भइरहेको गम्भीर बल्न छाला, आँखा) र airway श्लेम लाग्एको झिल्ली पनि रूपमा 1 मिलीग्राम / m³ रूपमा कम एकाग्रता मा, हुन्छ।
Phosphorous Anhydride वा फस्फोरस trioxide, P2O3 (P4O6) - सेतो स्फटिक ठोस (जस्तै मोम उपस्थिति), 23.8 सी को एक तापमान मा पिघलने र रूपमा 173,7 सी मा फोडे जो सेतो phosphorous, P2O3 धेरै विषालु छ । यो अम्लीय ओक्साइड, यसको सबै गुण छ। फस्फोरस ओक्साइड3कारण त्यहाँ अक्सिजन को कमी छ जहाँ वातावरण मा ढिलो ओक्सीकरण वा निःशुल्क पदार्थ (पी) को दहन गठन गरिएको छ। P2O3 + 3H2O → 2H3PO3: फस्फोरस trioxide एसिड गठन गर्ने चिसो पानी बिस्तारै प्रतिक्रिया। H3PO3 र H3PO4: यो फस्फोरस ओक्साइड तातो पानी संग तेजी प्रतिक्रिया, को प्रतिक्रिया विभिन्न तरिकामा ठाउँ लिन, परिणाम रातो फस्फोर (संशोधित allotropic podukt), फस्फोरस hydride र एसिड गठन हुन सक्छ। मिश्रण P4O7, P4O8, P4O9 को आक्साइड को गठन wherein P4O6 Anhydride को फस्फोरस अणुहरु को cleavage पछि, को थर्मल अपघटन। संरचना अनुसार तिनीहरूले P4O10 सदृश। सबैभन्दा यी P4O8 को अध्ययन।
Fourier श्रृंखला: विज्ञान को विकास को लागि इतिहास र गणितीय संयन्त्र को प्रभाव
संरचना र डीएनए र आरएनए को समारोह (तालिका)
अर्नोल्ड व्लादिमीर Igorevich: जीवनी, परिवार र प्रसिद्ध गणितज्ञ को उपलब्धि
वायलेट च्याट म्याक (सागरको बीजिंग): विवरणको विकास, विशेषताहरु
भित्री डिजाइन अपार्टमेन्ट गर्न एउटा व्यावसायिक दृष्टिकोण - वास्तविकता आफ्नो सपना खोल्दै
कान किन पप गर्छन् र रिङ्गटा, र बिरामी?
"छुट्टी गाउँ" Vityazevo: होटल को विवरण, सेवा,
पतन के हो? हामी सिक्न!
स्मार्टफोन र Wexler। ZEN 5: मोडेल, ग्राहक समीक्षा र विशेषज्ञ को समीक्षा
МР-79-9ТМ। "Makarych" - МР-79-9ТМ
मिर्गी: लक्षण र बारेमा थोडा को उपचार